I-Oracle nguMxhasi weNxulumano kwi-2019 Geospace World Forum - i-Geofumadas
I-Oracle nguMxhasi weNxulumano kwiForam ye-2019 Geospatial World Forum
Amsterdam: I-Media ne-Geospatial Communications iyavuya ukubonisa i-Oracle njengoMxhasi weNxulumano I-2019 yeGosa leeHlabathi leGeospatial . Isiganeko siya kwenzeka ukusuka kwi-2 ukuya kwi-4 ka-Ephreli ye-2019 kwiTetshi kunye ne-Park Park, e-Amsterdam.
Oracle inika uluhlu olubanzi 2D kunye 3D amandla isithuba ngokusekelwe OGC kunye ISO zolwazi nemigangatho, middleware, iinkcukacha ezinkulu kunye namaqonga efini. Olu buchwepheshe busetyenziswa zizixhobo zenkampani yesithathu, izicwangciso kunye nezisombululo, kunye nezicelo zoshishino ze-Oracle zokuhanjiswa kwendawo nakwifu.
Abaphathi ababini abaphezulu abavela e-Oracle, iSiva Ravada, uMlawuli oyiNtloko woPhuhliso lweZofthiwe kunye noHans Viehmann, uMphathi weMveliso, i-EMEA iya kubhekisana nabaphulaphuli kwinkomfa kwiinkqubo Indawo yokuHlola kunye noBuchule boBuchule y Cities Smart, ngokulandelanayo.
"Ngaphezu kweminyaka engamashumi amabini, iOracle yaphuhlisa kwaye yahambisa ubuchwepheshe bendawo njengenxalenye yeqonga lethu lolawulo lwedatha, izixhobo zophuhliso, ukusetyenziswa kunye neenkonzo zamafu," utshilo uJames Steiner, usekela-mongameli weOracle. "Sikholelwa ekubeni iitekhnoloji ze-geospatial zibalulekile kwisicelo ngasinye kwaye ziyinxalenye ebalulekileyo yezisombululo zeshishini kunye nemiceli mngeni esijongene nayo namhlanje nakwikamva."
Ukulawulwa kwedatha ka-Oracle kunye neqonga lezisombululo ezihlanganisiweyo zibe nempembelelo enkulu kumashishini we-geospatial, ngakumbi kwizicelo zeshishini, ubukrelekrele beshishini, ubukhulu be-GIS kunye neenkonzo zendawo. Siyavuya ukuba iQonga leHlabathi leNdawo yeHlabathi liyaqhubeka nokuba liqonga lokukhetha iOracle ukunxibelelana necandelo labasebenzisi bendawo, ”utshilo u-Anamika Das, uSekela Mongameli woPhuculo lweShishini kunye nokufikelela kwiGeospatial Media kunye noNxibelelwano.
Ngokuphathelele kwiHlabathi yeGeospatial Forum
I-Forum yeGeospatial Forum iyisicwangciso sokusebenzisana nesicwangciselwano esibonisa umboniso ohlangeneyo kunye wabelane ngawo jikelele welizwe jikelele. Kuyinto ngokuhlangana yonyaka iingcali ngaphezu 1500 kunye neenkokheli abamele yonke ecosystem geospatial: imigaqo-nkqubo lokugqibela karhulumente, ii-arhente yemephu yesizwe, icandelo labucala, imibutho amazwe kunye nophuhliso, amaziko yenzululwazi kunye emfundo, ngaphezu kwabo bonke, abasebenzisi zikarhulumente , amashishini kunye neeNkonzo kubemi.
Ngokudibeneyo kunye neDatshiman Kadaster, iforum ye-2019 iya kuthwala umxholo '# wokugqibela geospatial- Nika amandla amawaka ezigidi!' Ukubonakalisa itekhnoloji ye-geospatial njengoko ibiquitous, ngokubanzi kwaye "imiselwe kwangaphambili" kubomi bethu bemihla ngemihla. Eminye yezihloko eziza kuxoxwa ziquka iinjongo zophuhliso oluzinzileyo, izixeko ezihlakaniphile, ulwakhiwo kunye nobunjineli, uhlalutyo lwendawo kunye nobukrelekrele beshishini, okusingqongileyo; kunye neetekhnoloji ezivelayo ezinje nge-AI, IoT, idatha enkulu, ilifu, ibhlokhi kunye nabanye. Funda ngakumbi malunga nenkomfa e www.geospatialworldforum.org
Post edlulileyo«Edlulileyo Indawo edibeneyo - Isisombululo esifuna iGo-Engineering
Post Next Kutheni usebenzisa amawele edijithali ekwakhiweniOkulandelayo "